Sidee loo kiciyaa ruuxa jacaylka?
Dad tiro badan ayaa isticmaala sixir si ay u fahmaan arrimaha jacaylka. Waxaad samayn kartaa mulkiil, adoo samaynaya qaniin, laakiin waxaa ugu wanaagsan inaad la xiriirto jacaylka tooska ah ee jacaylka. Ha la xiriirin xoogagga aan la arki karin sababtoo ah madadaalada, haddii kale waxay sababi kartaa dhibaatooyin kala duwan.
Sida loo kiciyo jacaylka jacaylka - lambarka xulashada 1
Waxaad ku isticmaali kartaa adoo adeegsanaya guddiga Winja , guddiga wada hadalka ama guddiga Witch. Haddii aysan ahayn, markaa waxaad si fudud u sameyn kartaa analogue-ka oo leh waraaq cad. Ku qaad khariidada qol kasta marka laga reebo qolka jiifka. Ka sokow guddiga, waxaad u baahan tahay inaad sawir ka qaadato midka aad jeceshahay, baaquli biyo ah iyo shumac. Ka hor inta aanad wacin maalinta jacaylka jacaylka, riix dariishyada, iftiinka iyo telefoonka, guud ahaan, waa inaysan jirin wax mashquul ah. Ku dheji shumaca laydhka ah ee gacmahaaga, waxaad dhahdaa erayadan:
"Kaalay ii (magacaaga) jacaylka jacaylka iyo farxad.
Ii bogo oo ii farxi jacaylka.
Jawaab, ha aamusin, talo, caawimo. "
Waad ku soo yeeri kartaa ruux aad ku caawisid sixirkaba xitaa kali ahaan iyo degaanka dadka isku dhow. Haddii uu ruuxu taabto, wuxuu noqon karaa mid qabow ama waxaa jiri doona socodka hawada qabow. Si aad u hesho jawaabta dhabta ah, haddii ruuxu yimaado, waa lagama maarmaan in la isticmaalo guddiga ruuxa. Haddii qoruhu tilmaamayo jawaabta "Haa", markaa waxaad weydiin kartaa su'aalaha xiisaha. Ka dibna waxaad u sheegtaa naxariis iyo mahadsanid ruuxa, taas oo dhacda dhaqan ahaan loo tixgelin karo in la dhammeeyo.
Sidee loo wacaa jacaylka jacaylka saxda ah - lambarka ikhtiyaarka 2
Ka qaad qolka oo dhan waxyaabaha cas cas oo ha xiran dharka dhalaalaya. Si aad u soo jiito dareenka qofka aad jeceshahay, waxaad u baahan tahay inaad sawir qaadato dhawaan. Bartamaha qolka, waxaad dhigtaa miis ay ku jirto miis madow ah, meel sawir ah oo ku taal bartamaheeda, iyo ka hooseyso baaquli biyo cad. Gudaha, geli furka timaha iyo dhibic dhiig ah. Qaado shumac madow iyo, sameynta dhaqdhaqaaqyo wareeg ah, faqici magaca magaca la jecel yahay. Inta lagu jiro caadada, u maleyso in uu ku dhow yahay. Ka hor intaadan wacin ruuxa caawiyaha ah ee jacaylka, shumaca u soo dhawee sida ugu suurtogalsana sawirka una sheeg erayadan:
"Anigu waxaan kuugu yeedhaa, Ruuxa jacaylka, ii yimaada, ha joogin. Ii duco, addoonta Ilaah (magac). Naftaydu waxay ka timid jacayl kali ah. Waxaan dib u bixin doonaa sharciga. Jawaab. Ha aamusin! "
Ogaanshaha sida si haboon uhogasho jacaylka jacaylka, waxaad soo jiidan kartaa dareenka qofka aad jeceshahay, iyo sidoo kale cusbooneysiinta cilaaqaadka jira.
Sufismiska iyo Sufiyiinta ee haweenka iyo awoodda dumarka
Titans - kuwaas oo noocee ah iyo meesha uu ku dhex noolaa mitiriga Giriigta?
Dhexdhexaad - kan kanu yahay iyo sida loo noqdo mid?
Nymphs - masters of dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Sidee loo kobciyaa awoodda sixirka?
Ilaaha reer Slavs Velez
One-eyed mid ka mid ah - Sayniska ee Slavic
Hyperborea - Dhaqanka la waayay ee Slavski hore - sababa dhimasho
Isku xirka qumman ee u dhexeeya dadka - calaamadaha
Grail Holy - waa maxay iyo meesha uu ku yaal?
Laba waji ah Janus - yaa ku jiraa mitirka?
Habka caadiga ah ee muuqaalka ah
Qalabka Timaha ee Biedermeier
Ha ka xishoon: sawirada ugu caansan ee sawirrada xiddigaha!
Hammock for dhalaanka cusub
Maxaa hadiyad ah oo lagu dooranayo Maarso 8?
Heerkulka jirka ee hore uurka
Haweeneyda ugu quruxda badan ee adduunka ah
Kalsoonida King Philip
Bouquets Wedding 2014
Sidee loo daboolaa dabeecadda?
Maxaa riyadu daymayaan?
Saqafka dusha sare
Sibarit - Waa noocee qofkani yahay iyo waa maxay baqdinta?
Dharka dharka arooska leh qaanso
Cunto leh caloosha caloosha
Blouses ka soo kalluumeysiga 2013